Ciidamada Ammaanka ee Kenya oo sheegay inay qabteen haween lala xiriirinayo Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay saddex haween ah oo lagu tuhmayo in xiriir la leeyihiin maleeshiyaadka UGUS. ‘
Hay’adaha ammaanka Kenya ayaa gacanta ku dhigay ilaa 3 ruux o haween ah kuwaasi oo sida Kenya ay shegeeyso loogu tuhmayo in ay xiriir laleeyihiin falaagada ugus kuwaasi oo lagu hayo magaala xeebeedka mumbaasa ee Kenya.
Guddoomiyaha magaalada Mombasa ee Kenya Nelson Marwa ayaa sheegey in saddexda haween laga qabtay magaalada Ceelwaaq oo ku taala xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya, loogana shaki qabo in ay ku biiraan Al-Shabaab, isagoo xusay in ay ka soo tageen Mombasa oo ay ku soo wajahnaayeen Soomaaliya.
Labo ka mid ah haweenkaasi oo da’doodu u dhexeysa 20-21 jir waxa ay u dhasheen Kenya halka haweeneyda saddexaad ay ka soo jeeddo wadanka Tanzania, kuwaasi oo ay iminka ku socoto baaritanno dheeraad ah.
Umul qeyr Sadir Cabdulle oo 19 jir ah oo hogaaminaysay saddexdaasi gabdhood ayaa ilo wareedyo laga helayo laamaha ammaanka ee dalka Kenya waxa ay sheegayaan in dadkaasi ay ku biiri rabeen Ururka Gumaadka Ummadda Soomaaliyeed ee UGUS.
Hay’adaha ammaanka Kenya ayaa sheegaya in dadaka ugu badan oo isku dayaya in ay ku biiraan kooxaha argagixsada ay ka soo baxayaan magaalooyinka, Mombasa, Malinda, iyo kuwa kale, iyadoo saraakiishu ay tilmaameen inay xabsiyada u taxaabeen 54 ruux oo laga shakisanyahay.
Qaar kamid ah dalalka reer galbeedka ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay u safraan Kenya iyo Uganda ayado dowladda Kenya shalay ay shaacisay in ammaanka dalkeeda uu soo hagaagayay bilihii la soo dhaafay